Eufy RoboVac G20 Hybrid fanadiovana malina sy mahomby [Famerenana] | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 15/03/2022 13:36 | General, hevitra
Eufy dia manohy miloka amin'ny trano mifandray, manan-tsaina ary indrindra indrindra, manampy. Amin'ity tranga ity, tsy maintsy miresaka momba ireo robot kely boribory izay misy horonan-tsary maro ao amin'ny TikTok isika, matetika noho ny tsy fitiavana manokana izay itondran'ny mpikambana hafa ao an-tokantrano azy ireo, toy ny saka.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manadihady lalina ny Eufy RoboVac G20 Hybrid vaovao, safidy hafa amin'ny antonony miaraka amin'ny fisintahana lehibe sy ny fanamafisana mora. Fantaro miaraka aminay ity safidy farany ity amin'ny katalaogy fanadiovana mifandray izay atolotr'i Eufy antsika ary raha tena mendrika hodinihina ireo mpifaninana aminy.
2 Fametrahana ny singa sy ny toetra ara-teknika
3 Fanadiovana sy fampiasa
Amin'ity tranga ity dia tsy niloka i Eufy, tsy nanavao, tsy sahy ... Aleo tsoriko fa sarotra ny mahita robot mpanadio vacuum izay manintona ny sainao, amin'ny ankapobeny dia mitovy daholo izy ireo ary azoko fa izany no izy. noho ny zava-misy fa ny famolavolana dia tena miasa fa ny fanovana iray milimetatra fotsiny dia hitondra olana bebe kokoa noho ny vahaolana. Izany dia noho izany tsy horaisinay fa mitovy amin'ireo telo tapitrisa hafa eny an-tsena ity mpanadio banga robot ity ary hifantoka amin'ny fandrafetana ny fitaovana sy ny kalitaon'ny fitaovana ao aminy isika.
Tianao ve? Vidio amin'ny 299,99 euros fotsiny amin'ny Amazon izany!
mop azo sasana
Ny fitaovana dia 32 santimetatra ny savaivony ary ny tena mahagaga dia 7,2 santimetatra ny hateviny, ary efa nampitandrina antsika i Eufy fa fitaovana somary manify no atrehantsika, zavatra nohamafisintsika. Ny tapany ambony dia vita amin'ny fitaratra, manintona ho an'ny dian-tanana nefa tena mora diovina, zavatra tiako kokoa noho ny "jet black" izay matetika apetaka amin'ny marika hafa ary ny faharetany dia tsy mihoatra ny roa andro. Raha ny momba ny lanja, dia tsy manana tarehimarika marina isika, ary raha raisinay fa tsy hitondra azy any am-paosinay izahay, dia tsy noheveriko fa ilaina ny mametraka izany amin'ny mizana, na dia eo aza izany. tsara maso siny Azoko lazaina aminao fa maivana ilay izy.
Fametrahana ny singa sy ny toetra ara-teknika
Manana isika fandaharana somary nentim-paharazana amin'ny resaka singa amin'ny fototra ambany amin'ny Eufy RoboVac G20 Hybrid, miaraka amin'ny kifafa afovoany mifangaro, miaraka amin'ny bristles silicone sy nylon, izay araka ny hevitro dia mahomby indrindra amin'ny karazana surface rehetra. Miaraka amin'ny kodia roa cushioned ho afaka handresy ny sakana manodidina ny 3 santimetatra, miaraka amin'ny kodia tsy misy farany mitarika ny fitaovana sy ny lafiny borosy iray.
Ho an'ny aoriana Ny fitoeran-drano dia mijanona, ny fitoeran-drano, izay hiraikitra amin'ilay voalaza teo aloha, ary ny mop izay miraikitra amin'ny Velcro. Na izany aza, manana switch ON/OFF izahay, zavatra tsy hita amin'ity karazana vokatra ity tato ho ato ary tena ankasitrahana, indrindra raha mikasa ny tsy hampiasa izany mandritra ny fotoana maharitra, hoy i Eufy tsara.
Farany, ao amin'ny tapany ambony, araka ny voalazanay, dia manana ny fototry ny fitaratra tempered, bokotra tokana ho an'ny fanamafisana sy fitantanana ary famantarana LED fifandraisana WiFi, tsy misy mahagaga.
Ao amin'ny fizarana ara-teknika, manana Fifandraisana WiFi mba hampifanaraka ny RoboVac G20 Hybrid amin'ny fampiharana Eufy, misy amin'ny roa iOS toy ny Android maimaim-poana tanteraka. Manana sensor gyro ihany koa izahay ho an'ny fitetezana, ary koa andiana sensor mifantoka amin'ny robot tsy mianjera amin'ny habakabaka amin'ny haavo samihafa. Toy izany koa amin'ny lafiny suction hery, izay dia hihozongozona eo anelanelan'ny 1.500 sy 2.500 Pa araka ny filanay, ny surface hita sy ny hery izay nomenay tamin'ny alalan'ny fampiharana.
Fanadiovana sy fampiasa
Rehefa vita ny synchronize ny robot miaraka amin'ny fampiharana Eufy Home isika dia afaka mifandimby eo amin'ny maodely suction efatra sy ny fomba "mihoko". Ity fitaovana ity, na dia tsy manana rafitra fitetezana laser aza, dia mampiasa rafitra antsoina hoe Smart Dynamic Navigation, izany hoe mampiasa tsipika mifanandrify fa tsy rafitra kisendrasendra, izay mamela azy ho marina kokoa sy mahomby amin'ny fanadiovana.
Manana rafitra ny kirihitra amin'ny alalan'ny mop mando, izay, araka ny fantatrao, dia manintona ny hazo sy ny gorodona amin'ny sehatra, fa mamela "marika mando" amin'ny gorodona seramika.
Ny tabataba ambony indrindra avoakany dia 55dB zavatra mahavariana raha jerena ny fahaizany mitsoka sy ny hatevin'ny fitaovana, ary ny iray amin'ireo tranon'i Eufy dia ny miloka amin'ny robot mangina izay tsy voamarika. Farany, tokony hotadidintsika fa ho afaka hampifanaraka azy io isika Alexa isaky ny nahavita nanamboatra azy tamin'ny fampiharana haingana izahay.
Fanaraha-maso avy amin'ny fampiharana:
fanaraha-maso mitondra fiara
Fanadiovana toerana (amin'ny faribolana)
Ho an'ny fizakantena, handeha hivezivezy eo anelanelan'ny 120 minitra izay atolony antsika amin'ny fomba mangina amin'ny fisotro kely indrindra, manaraka ny fanadiovana 70 minitra amin'ny fomba mahazatra ary eo amin'ny 35 minitra eo ho eo raha apetratsika amin'ny fomba tsotsotra ambony indrindra.
Amin'izao fotoana izao isika dia miatrika robot iray azo ampiasaina, izay misongadina indrindra amin'ny maha-mpangina sy mirindra, izay lavitra ny fihatsarambelatsihy hafa dia voafetra amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny fomba tsy misy invasive. Ampy ny fahaleovan-tena ary miavaka ny herin'ny suction, indrindra raha jerena ny haben'ny fitaovana.
Ny fampiharana dia manana andiana fiasa voafetra izay mifanaraka amin'ny toetran'ilay fitaovana. Azo antoka fa mihaona isika miatrika safidy hafa ao anatin'ny antonony amin'ny vidiny izay amidy any Espaina dia 300 euros, na dia afaka mahazo azy mivantana avy amin'ny teufy online store. Indray mandeha isika dia mila mandanjalanja raha mendrika ny mividy fitaovana amin'ny vidiny mitovy izay manolotra endri-javatra bebe kokoa, na miloka amin'ny orinasa ekena izay azo antoka ny fiasa sy ny faharetany. Mandritra izany fotoana izany dia tsara ny traikefa ananantsika amin'ny fanadiovana, ny fisintomana, ny fahaleovan-tena ary ny tabataba miaraka amin'ity Eufy RoboVac Hybrid G20 ity.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 15 tamin'ny 2022
Fanovana farany: Diaben'ny 15 tamin'ny 2022
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Eufy RoboVac G20 Hybrid fanadiovana malina sy mahomby [Famerenana]
Tronsmart dia manolotra Bang 60W, mpandahateny portable masiaka ho an'ny fety